- News Fitsipika
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Nokia relaunches ny HERE sarintany sy ny Fikarohana fampiharana ho an'ny iOS” dia nosoratan'i Stuart Dredge, fa theguardian.com tamin'ny Alarobia 11 Martsa 2015 13.04 UTC
Nokia no relaunching ny HERE sarintany sy ny Fikarohana fampiharana ho an'ny iOS, rehefa notching ny 4m alaina ny Android dikan-, izay nanomboka tamin'ny Oktobra 2014.
Tahaka ny Android, ny iOS App dia ho afaka ny télécharger sy hampiasa rehefa nandefa taty aoriana amin'izao fotoana izao (11 March), sy ny manan-danja fivarotana manondro ny fahaizana mitahiry Maps ho an'ny 118 firenena eo amin'ny fampiasana fitaovana ho an'ny ivelan'ny aterineto, fahavaratra amin'ny tambajotra finday angon-drakitra fiampangana.
Napetraka ho toy ny mpifaninana amin'ny Google Maps - ary amin'ny iOS, ny preloaded Apple Maps fampiharana - HERE koa ny ivelan'ny aterineto kosa-by-indray Fikarohana endri-javatra ho an'ny mpamily, fitateram-bahoaka toro-lalana ho an'ny mpandeha an-tongotra, ary ny fahaizana mitarika amin'ny antontan-kevitra, rehefa velona ny fifamoivoizana an-tserasera.
HERE tany am-boalohany misarom-boaly amin'ny 2012, voalohany ho toy ny manokana ny fampiharana ny Nokia ny Windows Phone finday avo lenta, na ny drafitra mba hanitatra ny Android sy ny iOS dia niresaka momba hatramin'ny voalohany.
Related: Triatra eo amin'ny sarintany nomerika: izay 'geoweb’ mahazo diso momba ny tena eny an-dalambe
Tokoa, HERE dia navoaka ho toy ny teratany iOS rindrambaiko tamin'ny Novambra 2012, talohan'ny niala Apple ny App Store in Desambra 2013 noho ny orinasa ny finoana fa - ao amin'ny mpitondra teny ny teny - "Fanovana vao haingana ny iOS 7 manimba ny mpampiasa traikefa ".
Ny fampiharana no nanomboka nalefa ho Samsung Galaxy-marika Android finday avo lenta tamin'ny Aogositra 2014, talohan'ny beta pirinty nandeha hiaina ao amin'ny Google Play lehibe Android App Store fa Desambra.
ny fampiharana nivoaka avy beta tamin'ny Febroary 2015, amin'ny izay manondro fa efa alaina mihoatra ny 3m in-, na dia Nokia Nilaza ny Guardian fa efa nampiana iray hafa 1m Android alaina ao amin'ny volana nanomboka teo.
iOS dia mety hanome tosika ho manan-danja izany tanteraka, na dia Nokia dia inoana hanatratra ny 10M alaina tratra tao anatin'ny roa andro ny standalone Google Maps fampiharana taorian'ny nivoahany ho an'ny iOS in Desambra 2012, fotoana fohy taorian'ny Apple efa nanaisotra ny dikan-preloaded eo amin'ny fitaovana.
Tamin'ny Aprily 2014, Nokia Microsoft nividy ny fitaovana sy ny asa fandraharahana, amin'ny HERE sisa ny ampahany amin'ny orinasa tavela any Failandy toy ny fikambanana tsy miankina.
Raha ny mpanjifa fampiharana dia afaka ny misintona sy hampiasa, Nokia mahatonga bola avy eto amin'ny alalan'ny fahazoan-dalana efaha noho ny angona - ohatra ho an'ny zanabolana Fikarohana rafitra napetraka amin'ny fiara, ary koa ny Microsoft.